Fivoriana Fanao Isan-taona 2013: Fivoriana Be Mpanatrika Indrindra
OLONA 257 294 tany amin’ny firenena 21 no nanatrika ny fivoriana faha-129 nataon’ny fikambanana Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ny asabotsy 5 Oktobra 2013. Tao ny nanatrika mivantana, fa nisy kosa nanaraka tamin’ny video nampitaina tamin’ny alalan’ny Internet. Naverina nalefa ilay video ny ampitson’iny, mba hojeren’ny Vavolombelona hafa. Nitontaly 1 413 676 àry ny mpanatrika, tany amin’ny firenena 31. Iny no be mpanatrika indrindra tamin’ny fivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah hatramin’izay.
Taoriana kelin’ny 1920 ny Vavolombelon’i Jehovah no nanomboka nampiasa telefaonina na radio, mba hampitana ny fivoriambeny tany amin’ny firenena maro. Izao kosa efa misy Internet, ka afaka manaraka ny fandaharana amin’ny video na dia ny olona any amin’ny toerana mitokana aza. Mety hampitaina mivantana izany na tara kely.
Efa herintaona mahery ny sampana maromaro no nanomana ny fandefasana an’ilay video. Tany Brooklyn, any New York, no nandrindrana an’ilay fampitana mivantana. Niasa andro aman’alina ireo teknisianina, tamin’ny faran’ny herinandro nandefasana an’ilay video, satria maro amin’ireo tany nandefasana an’ilay izy no tsy mitovy ora.
Toerana Nampitana An’ilay Video
Foibeny: Efitrano Fivoriamben’ny Vavolombelon’i Jehovah any New Jersey, Etazonia; mpanatrika: 4 732
Be mpanatrika indrindra: Perth, any Aostralia; mpanatrika: 7 186
Farany avaratra: Fairbanks, any Alaska; mpanatrika: 255
Farany atsimo: Invercargill, any Nouvelle-Zélande; mpanatrika: 190
Lavitra indrindra: Perth, any Aostralia, any amin’ny 18 700 kilaometatra eo ho eo avy any New Jersey
Ahoana no Nampitana An’ilay Video?
Misy kamerà maromaro maka video an’ilay fandaharana.
Alefa any amin’ny fitaovana mandrindra ny sary sy ny feo ny sary azo, mba hifantenana izay tsara indrindra.
Atambatra ho video tokana ilay izy ary alefa any amin’ny foibe mandrindra an’ilay fampitana mivantana, any Brooklyn.
Any indray ilay video no amboarina mba hamoaka sary somary ratsiratsy sy tsara ary tena tsara.
Zarazaraina ho ampahana video folo segondra avy ilay izy.
Azo alefa amin’ny alalan’ny Internet amin’izay ireo ampahana video.
Azo alaina ao amin’ny Internet ireo ampahana video, ary efa nasiana fitaovana afaka maka sy mitahiry azy ireny any amin’ireo toerana hijerena an’ilay fandaharana. Io fitaovana io indray no manambatra azy ireo ho lasa video mandeha tsara.
Afaka mahita sy mandre an’ilay fandaharana ny mpanatrika.
Fivoriana Fanao Isan-taona—Oktobra 2013
Jereo ny zava-nisongadina tamin’io fotoan-dehibe io, izay nampitaina tany amin’ny toerana 1 830.